हवाई यात्रा संग जोडिएका रहस्यहरु – Ram Kumar Pariyar
Next अब नेपालको संरचना यस्तो हुने लगभग पक्का !
Previous एउटा हृदयिस्परसी संगीत
रोचक · २०७१ माघ ४ 0
रामकुमार परियार |	२०७१ माघ ४
हवाई यात्रासंग धेरै रहस्यहरु जोडिएका छन् जो कुरा हामीलाई थाहा छैन । त्यसो त हवाई यात्रा ९९ प्रतिशत सुरक्षित यात्रा मानिन्छ अनि दुर्घटना भैहाले ९९ प्रतिशत खतरनाक यात्रा मानिन्छ । संसारमा बिमान दुर्घटनाको सबै खबरहरु महत्वपूर्ण मानिन्छ कारण हवाई दुर्घटनाबाट सयौंको मृत्यु हुन्छ अनि देश/बिदेशका यात्रूहरुको मृत्यु हुन्छ । त्यसो त अन्तराष्ट्रिय बिमानहरु कतिपय आतंककारीहरुको सिकारमा समेत पर्ने गरेका छन् । यसै अवस्थामा हाल आएर हवाई यात्रा सुरक्षाको बिषयमा एक बहस सुरु भएको छ, की कुनै पनि तरिकाले हवाई यात्रालाई सक्दो सुरक्षित बनाउन सकियोस । हवाई यात्राको सुरक्षाको लागि पहिले देखि नै धेरै कुरामा सचेतता अपनाइन्छ जसको लागि एयरलाइंसको जरूरी दिशा-निर्देश पनि दिने गरिन्छ । तर यसको अलावा तमाम यस्तो कुरा पनि छ, जुन कुरा प्राय कसैलाई पनि थाहा हुन्न वा फेरी जहाजको पाइलट वा कुनै पनि सदस्यले यो कुरा अरुलाई बताउन चाहदैनन् । आउनुहोस: आज हामी तपाईलाई हवाई यात्रा संग जोडिएका बिभिन्न १० रहश्यको बारेमा बताउनेछौं ।
एक इन्जनको सहायताले पनि गर्न सकिन्छ हवाई यात्रा:
प्राय कमर्शियल विमानहरु एक इन्जिन खराब भए पनि सुरक्षित उड्न सक्छन् । कति पय अवस्थामा बिमानको एक इन्जिनले काम गर्न छोडे पनि विमानमा सवार यात्रिहरुलाई त्यति मात्र बताइन्छ, जति उनीहरुको लागि जान्न जरुरी हुन्छ । त्यसैले यात्रीहरुलाई कसैले पनि बताउदैनन् की विमानको एक इंजीनले काम गरिरहेको छैन ।
विमानमा फोन प्रयोग गर्न किन पाइदैन ?
विमानमा फोन वा त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक सामानहरु प्रयोग गर्न पाइंदैन । किनकि उड़ान गरिएको अवस्थामा फोनको प्रयोगले पाइलटको हवाई उपकरणको लागि मिल्ने जानकारीहरुमा गडबडी हुन सक्छ, जसमा दुर्घटनाको डर हुन्छ ।
अक्सिजन मास्कमा १५ मिनेट सम्मको लागि अक्सिजन हुन्छ उक्त समय बिमान निकै उचाईमा उडेको छ भने पाईलटले तल लैजान सक्छ ।
विमानमा इन्धनको मात्रा:
पायलटहरु प्राय सधै कम इन्धन खपत गर्ने दबावमा हुन्छन् । एयरलाइन्सको नजर सधै सक्दो इन्धन बचाई फाइदा लिने हुन्छ तर यदी विमान ज्यादा इन्धन लिएर यात्रा गर्दैछ भने र कुनै पनि कारण आंधी-तूफान वा कुनै अरु कुराको सिकार बनेको खण्डमा तुरून्त कुनै पनि अर्को एयरपोर्टमा सरण लिन सक्छ ।
प्लेनमा स्वास लिनको लागि सफा हावा:
बिमान उडिरहेको अवस्थामा विमानमा जुन फिल्टरेशन सिस्टम प्रयोग हुन्छ, उक्त कुरा कुनै पनि अस्पतालमा भन्दा पनि बढी शुद्ध हावा दिने खालको हुन्छ । यसै कारण विमानमा सफा हावा लिन पाइन्न भन्ने कुरा बास्तबिक हुन्न ।
प्लेनमा कहाँ बस्ने ?
सकेसम्म प्लेनमा यात्रा गर्दा अगाडीको सिटमा बस्दा राम्रो हुन्छ, कारण अगाडी बस्दा यात्रा भर स्वच्छ हावा लिन सकिन्छ ।
भिजिबिलिटी जीरो छ :
उडानको क्रममा कतिपय समय बाहिरको कुरा देखिदैन तर पनि पाइलटले कहिलै पनि आफुले केहि नदेखेको कुरा भन्दैनन् । पृथ्वीको केहि भागमामा प्लेनबाट बाहिर केहि पनि नदेखिने ठाउँ पनि छ तर पाईलटहरु यस्तो अवस्थामा पनि आत्तिदैनन् ।
हामी तूफानमा छौं :
चाहे प्लेन खतरामा परोस वा ठुलो आँधी तूफान आओस् तर पनि पाइलट सिर्फ खराब मौसमको मात्र कुरा गर्छन् । जतिसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि पाईलटले जहाज खतरामा छ भनेर भन्न चाहदैनन् ।
Nice Landing भनेको सुन्न मन पराउछन् पाईलटहरु :
चाहे जति सुकै खराव यात्रा होस् पाईलटहरु यात्रुहरुले आफ्नो प्रशम्शा गरेको रुचाउछन् भन्ने गरिन्छ- प्राय पाइलटहरु विमानको सफल उडान पछी यात्रहरुले आफुलाई धन्यवाद भन्दै ‘नाइस ल्याडिंग’ भनेको सुन्न रुचाउछन् ।
पाइलटले हेडफोन निकाल्नुको मतलव :
फ्लाइटको दौरान पाइलटले आफ्नो हेडफोन निकाल्नुको मतलव सिर्फ यति छ की उनीहरु यात्रुलाई सामप्यतामा राख्न चाहन्छन् अनि यात्रुहरुले दिएको निर्देशन सुन्न सकुन ।
उच्च रक्तचापका बिरामीले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु